Europe's Top Luxurious Trains | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izitimela eziphezulu eYurophu Zikanokusho
Izitimela eziphezulu eYurophu Zikanokusho
Qeqesha Ukuhamba eScotland, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 10/04/2021)
Awunayo ukuba Bollywood umlingisi ngempela ukubona ingaphakathi lezi langa, izitimela zikanokusho, kodwa usethe isinqamu ezisindayo imali eceleni ukuze azijabulele. Uma unethalente cishe £ 3, 000+ onga, ukhethe uya khona, hlanganisa izinto zakho, futhi ake lokhu okuhlangenwe nakho kwempilo yonke kuqale! Konke mayelana yale nhlanganisela okunethezeka, induduzo, futhi konke okuningi indawo ebabazekayo eYurophu uyokwenzela kwalibaleka.
Nalu Umhlahlandlela yaseYurophu ezintathu ethandwa kakhulu, izitimela zikanokusho.
A isitimela ukuthi yethulwe abahambi ezweni isitimela nokubukisa emuva 1982 isitimela esifanayo esisengukukhetha okukodwa kwabaningi babahambi baseYurophu nabalandeli bezitimela zikanokusho. Ngakho, kunoma ngubani obheka ukujabulela ukunethezeka kwesitimela okungenakuqhathaniswa, Venice Simplon Orient Express indlela yokukwenza. Abaningi uhambo abadumile ka lo phunyuka zikanokusho esiphakathi eLondon Venice. Nokho, abaningi abakwazi ukumelana uya okwengeziwe ukuze Istanbul nase-Berlin, nge Berlin kokuba zokugcina stop umkhankaso isitimela. Lapho uhamba ngalesi sitimela, unazo labapheki engcono emhlabeni abasebenza ukudla kwakho futhi Suites olulodwa futhi wabelane ukuthi kukhona 5-star impahla.
Kanye imoto yokudlela futhi lounge, kukhona ezazinakho konke ibha indawo izivakashi ... khm, abahambi. Lapho ucabanga Creme de la Creme izitimela zikanokusho, Venice Simplon Orient Express lapho ingqondo yakho ngokushesha liqala!
Venice ukuze London ithikithi kuyokulahlekisela cishe £ 2,700. I ride ethatha 16 amahora.
Bolzano Venice Izitimela
Vienna Venice Izitimela
Trieste Venice Izitimela
Udine Venice Izitimela
Belmond Royal ngoSelkirk Izitimela Zikanokusho
A isitimela ophila ngempela kuze kube namasiko bobukhosi, IBelmond Royal Scotsman iyi kufezeka iphupho. Ukuba phakathi phezulu 3 izitimela zikanokusho, Belmond uye evumelanisiwe imizila ozokuthanda. Lezi zihlanganisa Scotch Malt Whisky Inqola, Wonders Western Scenic, Scotland sika Classic Splendours, Dales Lakes & Gardens, nokuningi okuningi. Belmond uqhosha amasevisi spa, kanjalo! Usuku-4 Highland Classicmost kuyinto ukuvakasha ethandwa kakhulu. Isitimela esiqala April kuya ku-October, basibekele eziningi ngokuphelele langa namathafa ebabazekayo, kuhlanganise Isle of Skye. Hlala ukhululeke futhi unethezeke yi omkhulu amafasitela ahlotshiswe ngokweqile, ukuphuza kwezinye iwayini engcono futhi gush phezu wobuhle Scotland.
Ticket izintengo ukuqala ngo £ 2.350 umuntu ngamunye.
Izitimela zeGolden Eagle Danube Express
Awusoze ukuzwa Europe ngendlela ubungeke ahambe Golden Eagle iDanube Express. Isitimela prides ku Suites Akumangalisi zikanokusho, Deluxe kanye namagugu apholile. Futhi ukuziqhayisa izindlu engcono yokudlela futhi ibha lounge on amasondo. Ngu kude omunye kakhulu izitimela zikanokusho oyoze ukugibela Golden Eagle iDanube Express izipesheli 5 ukuze 12 kulolu hambo izinsuku '. Ihlanganisa inani izindawo kuhlanganise Budapest, ePrague, Zurich, Vienna, Venice, Istanbul, Innsbruck, Sofia, futhi abaningi. Kukhona futhi amaningi kwezinye izindawo (izinkambo) ongakhetha kuzo. Zonke kulolu hambo Golden Eagle iDanube Express zifaka off-isitimela izinkambo kanye nakho.
Amathikithi salokhu isiqalo owodwa kusukela £ 22.260 for Uphakeme Deluxe Class.
Zurich ukuze Innsbruck Izitimela
Vienna ukuze Innsbruck Izitimela
Cologne ukuze Innsbruck Izitimela
Uhambo oluya eYurophu lubandakanya Izitimela zikanokusho kanye nenjabulo yalo uqobo, kodwa uhambo oluya eYurophu kunoma yisiphi kulezi zitimela KUKHO KONKE. Thenga ithikithi lanoma yikuphi ukugibela isitimela ngisho nasendaweni ngayinye Londoloza Isitimela futhi uqale ukujabulela Europe.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma unga lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#ezibizayo #Ukunethezeka #traveleurope ukulele Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela